Beesha caalamka oo soo faro-gelisay dooda ka taagan guddiyada doorashooyinka | Warkii.com
Home warkii Beesha caalamka oo soo faro-gelisay dooda ka taagan guddiyada doorashooyinka
war Lagu kalsoon yahay oo ay heshay Warkii.com ayaa sheegaya in beesha caalamka ay Madaxweynaha Soomaaliya kala hadashay doodda ka taagan dhismaha gudiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad gobaleed.
Mucaaradka ayaa dhowaan sheegay in guddiyada ay ku jiraan xubno ka tirsan hay’adda sirdoonka ee NISA, halka sidoo kalena uu muran ka taagan yahay in xubnaha Somaliland ay soo magacowday xukuumadda.
Xog aan helnay ayaa sheegeysa in beesha caalamka ay Madaxweyne Farmaajo ka dalbatay in guddiyada oo dhan ee qaranka iyo heer maamul laga saaro wixii ciidan iyo shaqaale dowladeed ah.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa Warkii.com u sheegay in beesha caalamka ay dhowr qof ka calaamadeysay guddiyada farsamada iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Qaranka iyo guddiyada doorashooyinka ee maamul gobaleedyada HorShabeelle, K/Galbeed iyo Galmudug, halka kan Somaliland laga dalbaday in ay xaliso doodaha ku geedaaman iyadoo loo marayo waddo sharci ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabduaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu u sheegay beesha caalamka inaysan jirin ciidan ku jira guddiyadan.
Xubno kamid ah Villa Somalia oo aan la hadalnay islamarkaana aan weydiinay arintaan ayaa sheegay in dalkaan uu yahay dal madaxbanaan oo xor ah islamarkaana aan waxba loo yeerin, taas oo keeni karta in ay diidaan dalabka mucaaradka iyo xubnaha beesha caalamka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Jeneral Mukhtaar Xuseen Afrax, oo xalay shir jaraa’id ku qabtay xafiiska ra’iisul wasaaraha, ayaa sheegay in guddiyada ay yihiin sida loogu heshiiyey oo loo magacaabay, islamarkaana aan waxba laga beddeli doonin oo doorashada ay sidaas ku dhaceyso.
Previous articleItoobiya oo soo bandhigtay magacyada iyo sawirrada xubno ka tirsan Al-Shabaab & Daacish
Next articleDF oo jawaab ka bixisay hadalkii Maareeye
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maalmo ka hor shaaciyay liiska guddiga farsamada ee doorashooyinka qaranka iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya. Guddigaan...
Shirka musharaxiinta oo galay maalintii shanaad & wararkii ugu dambeeyey
Xildhibaan Cabdixakiin iyo Runsheeg oo hadallo kulul isku dhaafsaday...